Tanoran’i Djibouti Mijery Tàratra An’i Burkina Faso Mba Handrafetany Làlana Demaokratika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Novambra 2014 3:57 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, čeština , English
“Hisian'ny Firenena Iray Demaokratika Eto Djibouti”: Hetsi-panoherana manohitra ny fanjakana tsy refesi-mandidy Djibouti , avy amin'ny USN Djibouti (dikasary)
Miparitaka manerana ny tanibe Afrikana ny fiantraikan'ny hetsiky ny tanora tao Borkina Faso nifanome tànana hisian'ny demaokrasia. Andro vitsy taorian'ny nanesorany ny filoha Blaise Compoaré rehefa nitoetra teo amin'ny fitondràna nandritry ny 27 taona, dia toa tanora aminà firenena afrikana iray hafa indray ankehitriny no vonona hiteny fa ampy izay ny an'ilay iraikalahy mpifehy efa ela teo amin'ny fitondràna , Ismaïl Omar Guelleh.
Efa hatramin'ny 1999 ilay lehilahy mpitarika mahery ao Djibouti no teo amin'ny fitantanana ny firenena ary tsy voahozongozona teo, na teo aza ireo hetsi-panoherana marobe nitakiana ny fifandimbiasan-toerana tao amin'ny fireneny. Zanatany Frantsay fahiny ny Repoblikan'i Djibouti, ahitàna vahoaka eo amin'ny 850.000, hita eo anelanelan'i Eritrea, Etiopia ary Somalia.
Tamin'ny 2010, vitan'i Guelleh ny nampandany ny fanavaozana lalàm-panorenana mba hahafahany manana fe-potoam-piasana fanintelony hijanonana eo amin'ny toerany. Io tetikady io no tena nitarika tamin'ny fanesorana an'i Compoaré tao Burkina Faso. Filoha nandritry ny 15 taona i Guelleh, fa ny antokony kosa dia efa 34 taona no teo ain'ny fitondràna.
Tamin'ny 3 Novambra, nanao diabe ny Hetsiky ny Tanora Mpanohitra, namakivaky ireo arabe tao Djibouti hitaky ny fampiharana ny fifidianana demaokratika mangarahara ao Djibouti. Ity ny lahatsary iray ahitàna ireo hetsi-panoherana :
Nanoratra izao manaraka izao i Houssein Ibrahim Houmed, Djiboutiana bilaogera, mikasika ireo zava-nitranga tao Burkina Faso:
Raha avy ao Djibouti no jerena, dia azoko lazaina marina fa ny ady madio / rariny ataon'ny vahoaka ao Burkina Faso no tohanan'ireo mpikambana sy mpanohana avy amin'ny antoko politika Uguta-Toosa (Djibouti) Asaiko ny vovonana USN (National Union for Salvation) an'ireo Djiboutiana mpanohitra mba haneho ny fanohanany tsy misy fepetra ny mpanohitra izay namaky ady tamin'i Blaise Compaoré, ilay Borkinabe mpitondra mpanao jadona.
Diso fantatra loatra amin'ny tsy fitiavany demaokrasia ny fitondràn'i Guelleh. Tamin'ny 2011, nialoha ny fifidianana, voararàn'ny governemanta izay rehetra fihetsiketsehana sady nosambontsamborim-poana ireo mpanao hetsi-panoherana am-pilaminana sy mpitarika ny fanoherana, araka ny voalazan'ny Human Rights Watch.
Kanefa, ny tolona miainga ankehitriny ao Djibouti mba hisian'ny demaokrasia dia mifamatotra akaiky amin'ny fifandraisana ananan'ny firenena amin'ireo firenena hafa mifanolo-bodirindrina aminy, ary hatramin'ny teokareny vao misonga aza.
Samy nisedra fanamby azy ireo manokana avokoa i Etiopia, Eritrea ary Somalia tamin'ny fampidirana dingana demaokratika maharitra ho ao anatin'ny tontolo politikan-dry zareo. Ny tsindrim-peo napetraka tamin'ny ady atao amin'ny asa fampihorohoroana any amin'ny faritra no nahafahan'ireo mpifehy an'ireny firenena ireny nahazo sitraka manokana tamin'ny fanampian'i Etazonia na dia tsy nahavaly tanteraka amin'ny lafiny maro ny zavatra notakiana mahazatra momba ny demoakrasia aza. Ankoatra izay, ny herijika hisian'ny firoboroboana tampoka sy malaky ao amin'ny faritra dia nanamafy ny vahohon'i Guelleh teo amin'ny toerany. Malik Ibrahim, manampahaizana momba ny faritra ao amin'ny Tendron'i Afrika, no nanazava ny fomba ampiasàn'i Guelleh ny tambajotrany iraisam-pirenena mba hanamafisany ny fahaiza-mitarika ananany:
Amerikana, Frantsay, Alemana, Shinoa, Rosiana ary hatramin'ny Japoney no mifaninana hametraka ny dindony sy ny heviny amin'ny governemanta ao amin'ity firenena ity. Vokany, ny tena loharanom-bola miditra ho an'i Djibouti dia avy amin'ireo haba alainy amin'ireo Tandrefana mpiara-miasa aminy amin'ireo foto-drafitrasa miaramila ampiantranoiny. Raha tsy mazava tsara ny antontam-bola tena izy, i Etazonia manome eo amin'ny $60 tapitrisa isan-taona, raha ny Frantsay sy Japone samy manome eo amin'ny $30 tapitrisa. Ny tena akaiky indrindra, nosoniavin'ny governemanta Djiboutiana ny fiaraha-miasa iray eo amin'ny resaka fandriampahalemana sy tetikadim-piarovana iarahany amin'i Shina. Ho tambin'ny fanofànana ny tafika mitam-piadiana ao amin-dry zareo, Djibouti manome fotodrafitrasa miaramila ho ampisain'i Shina.
Kanefa, afaka miova faran'izay haingana ny zavatra rehetra toy ny noporofoin'ireo zava-nitranga tao Burkina Faso. Naneho indray ny fanantenany ho an'ny fireneny ilay bilaogera Houssein Ibrahim Houmed:
Tsy ho tonga ary tsy ho hita mivaingana ny farany ho an'ny fitondràn'i Guelleh raha tsy rehefa tafapetraka ao amin'ny Repoblikan'i Djibouti ny Tany Tàn-dalàna. Sahiko ny manantena hoe hanao izay hahatanteraka izany demaokrasia izany i Etazonia, Japana ary Frantsa ary tsy hamela ny fandrombahana fahefana avy amin'ireo mpandova tsy maty voalavo an-kibo.